E14 18-40W halogen မီးသီးမီးဖိုမီးသင်္ဘောမီးအိမ် T300 အမြင့်အပူချိန် Resistance - တရုတ် Haimen Xinrong လျှပ်စစ်
E14 မီးဖိုမီးလုံးမီးအိမ် Holder
E27 မီးဖိုမီးလုံးမီးအိမ် Holder
G9 မီးဖိုမီးလုံးမီးအိမ် Holder
Rect ။ မီးဖိုမီးလုံးမီးအိမ် Holder
round မီးဖိုမီးလုံးမီးအိမ် Holder
E14 X555-54 အမြင့်အပူချိန် Resistance မီးဖိုမီးလုံးမီးအိမ်ဟို ...
G9 WGB-တစ်ဦးကမီးဖိုမီးသင်္ဘောမီးအိမ် Holder အီး T300 အမြင့် Temp ...
E14 15W အလင်းထုတ်မှုမီးသီးမီးဖိုမီးလုံးမီးအိမ် ROHS အဒေီ 110-130 ...
G9 18-40W halogen မီးသီးမီးဖိုမီးလုံးမီးအိမ် ROHS အီးမီးဖို Stea ...
E14 18-40W halogen မီးသီးမီးဖိုမီးသင်္ဘောမီးအိမ် T300 မြင့်မား ...
E14 18-40W halogen မီးသီးမီးဖိုမီးသင်္ဘောမီးအိမ် T300 အမြင့်အပူချိန် Resistance
halogen မီးဖိုမီးသီး Haimen Xinrong လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီကို 1999 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Ltd.Our မီးသီးစက်ရုံကထုတ်လုပ်, ငါတို့ထုတ်ကုန်များအားလုံးမီးဖိုအလင်းမီးသီးမြင့်မားတဲ့အပူချိန်များအတွက်အကောင်းဆုံးဟေလိုဂျင်အကြောင်းအရာ, ငါတို့သည်ကိုအသုံးပြုဖို့ E14 ဟေလိုဂျင်၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ quality.This မျိုးကိုလိုက်နာခြင်းဖြစ်သည် E14 ဟေလိုဂျင်မီးဖိုမီးသီး 300 ℃မြင့်မားတဲ့အပူချိန်အခြေအနေမျိုးအတွက် Whirlpool Thermal စက်ဝိုင်းစမ်းသပ် pass ကိုအာမခံဖို့ကော်, High-အပူချိန် resustant ဖြူဂဟေနှင့်အခြားမြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ပစ္စည်းများနှင့်ဒီဇိုင်းများကိုတင်သွင်း။ halogen မီးသီး 1. ...
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: D: / A, D ကို / P ကို, T / T
halogen မီးဖိုမီးသီး Haimen Xinrong လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီကို 1999 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Ltd.Our မီးသီးစက်ရုံကထုတ်လုပ်, ငါတို့ထုတ်ကုန်များအားလုံးမီးဖိုအလင်းမီးသီးမြင့်မားတဲ့အပူချိန်များအတွက်အကောင်းဆုံးဟေလိုဂျင်အကြောင်းအရာ, ငါတို့သည်ကိုအသုံးပြုဖို့ E14 ဟေလိုဂျင်၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ quality.This မျိုးကိုလိုက်နာခြင်းဖြစ်သည် E14 ဟေလိုဂျင်မီးဖိုမီးသီး 300 ℃မြင့်မားတဲ့အပူချိန်အခြေအနေမျိုးအတွက် Whirlpool Thermal စက်ဝိုင်းစမ်းသပ် pass ကိုအာမခံဖို့ကော်, High-အပူချိန် resustant ဖြူဂဟေနှင့်အခြားမြင့်မားသောအပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ပစ္စည်းများနှင့်ဒီဇိုင်းများကိုတင်သွင်း။
မြင့်မားတဲ့အပူချိန်များအတွက် 1. အားလုံးဟာ Optimum halogen အကြောင်းအရာ။
pyrolysis (ကို C °ခွင့်ပြုချက် Ambient အပူချိန် 300) အတွက်သင့်တော်3။
4. ပျမ်းမျှအသက်တာကို: 2,000 ဇ
6. အခြေစိုက်: E14
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံထဲကနေတရုတ်ရာ၌အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်တာရှည်ခံဝယ် e14 ဆီမီးခွက်ကိုင်ဆောင်သူမဝယ်သို့မဟုတ်လက္ကားမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ Xinrong လျှပ်စစ်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဦးဆောင်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအခါစိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အခမဲ့နမူနာကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
နောက်တစ်ခု: G9 18-40W halogen မီးသီးမီးဖိုမီးလုံးမီးအိမ် ROHS အီးမီးဖိုမီးသင်္ဘောမီးသီး
2. အပြီးအစီးကုမ္ပဏီစနစ်, စုံလင်သောစက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အား;
ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးသေချာစေရန် 4. အပြီးအစီးလက်မှတ်;
ဖောက်သည်ကျေနပ်မှုမှအရောင်းဝန်ဆောင်မှု - ပြီးနောက် 5. ပြီးပြည့်စုံသော။
Haimen Xinrong လျှပ်စစ် Co. , Ltd မှ 1999 ခုနှစ်တွင်မီးဖိုမီးခွက်သည်ကိုင်ဆောင်သူ၏သုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြုတဲ့ professional ထုတ်လုပ်သူတည်ထောင်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့မီးဖိုမီးခွက်သည်ကိုင်ဆောင်သူအမျိုးမျိုး, များသောအားဖြင့်ဓာတ်ငွေ့မီးဖို, စင်ကြယ်သောရေနွေးငွေ့မီးဖို, ရေနွေးငွေ့မီးဖို, မီးဖိုအလင်းရောင်လ်တာအတွက်အသုံးပြုကျွန်တော်တို့ရဲ့မီးဖိုမီးသီးကိုင်ဆောင်သူသည်။
အဆိုပါအရည်အသွေးမြင့်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံထဲကနေတရုတ်ဖန်ဆင်းတာရှည်ခံမဝယ်မီးဖိုမီးခွက်သည်ကိုင်ဆောင်သူမဝယ်သို့မဟုတ်လက္ကားမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ Xinrong လျှပ်စစ်တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဦးဆောင်ထိုကဲ့သို့သောထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုအခါစိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အခမဲ့နမူနာကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
ဆားမီးထွန်း 15w 25w T22 မီးဖိုမီးသီးအသုံးပြုခြင်း
15w E14 Clear ကိုမီးဖိုမီးသီး
15w E14 မီးဖိုမီးသီး
Clear ကို Glass ကိုမီးဖို မီးသီးများ
E14 ဆားမီးအိမ် မီးဖိုမီးသီး
E14 ဆားမီးအိမ်မီးဖိုမီးသီး T22 230v 25w
Electrolux မီးဖို halogen အလင်းမီးသီး
အပူ Risistant မီးသီးဘို့မီးဖို
အလင်းထုတ်မှုမီးသီးမီးအိမ် Holder Fittings
မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖိုမီးသီး T22 မီးဖိုမီးသီး
မီးဖိုအလင်းမီးဖိုမီးသီး Flat ဌာနမှူးမီးအိမ် E14 Holder
မီးဖိုအလင်းမီးသီး Buy ရန်အဘယ်မှာရှိ
G9 18-40W halogen မီးသီးမီးဖိုမီးလုံးမီးအိမ် ROHS အီးမီးဖို ...
No.18, Guangping လမ်း, Liuhao မြို့, Haimen စီးတီး, Nantong, Jiangsu, တရုတ်